Amaphoyisa ayalivuma iphutha lawo ngodaba lukaKatlego Joja | News24
LAST UPDATED: 2019-07-21, 09:17
Amaphoyisa ayalivuma iphutha lawo ngodaba lukaKatlego Joja
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni saseGauteng uthi kube yiphutha lamaphoyisa ukuba benqabele umndeni kaKatleko Joja icala lokulahleka kwakhe.
UBrigadier Mathapelo Peters ubekhuluma uhlelweni lwasekuseni ku-eNCA lapho eveze khona ukuthi kube yiphutha elibi ukuthi amaphoyisa atshele lo mndeni ukuba ulinde amahora angu-24 ngaphambi kokuvula icala lengane elahlekile.
"Kwaphuma umyalelo oqondile kazwelonke ukuba amacala abantu abalahlekile kumele athathelwe phezulu. Ngale kwalo myalelo, lowo owayenguNgqongqoshe wamaPhoyisa uFikile Mbalula wakhipha umyalelo wokuba imacala abantu besifazane kanye nezingane yiwona okumele athathelwe phezulu kakhulu,"kusho uPeters.
OLUNYE UDABA:Uhleli lubhojozi umndeni otakule uThabani Mzolo osizini
Isidumbu sikaKatlego, 10, sitholakale sintanta emfuleni waseMamelodi ngeSonto ngemuva kokuba alahleke ngoLwesine olwedlule.
Le ngane ibiphila nokukhubazeka kohlobo lwe-Autism.
Umndeni wakubo uthi uphatheke kabi kakhulu ngendlela amaphoyisa alusingatha ngayo lolu daba.